Ukhuseleko loluntu kwi-Russia: inkqubo, amazinga neemfanelo wachaza - Expat Isikhokelo Russia - Russian abaqondisi-mthetho
Ingaba eligible for ukhuseleko loluntu kwi-Us. Funda malunga Russian yokhuseleko lwezentlalo system kwaye imirhumo, dibanisa njani ukufumana i-Russian yokhuseleko lwezentlalo inani kwaye ibango loluntu nentlalo-ntle ngokolawulo Saserashiya. I-Russia-arhente yokhuseleko lwezentlalo indlela luxanduva urhulumente, ikakhulu overseen yi-Nesebe Lezabasebenzi kwaye intlalontle. Kwezinye iimeko, expats abo kuba wethutyana okanye osisigxina residency anelungelo izibonelelo ihlawulwe yonke yi-arhente yokhuseleko lwezentlalo kwi-Russia, ukuba baya behlawule kuyimfuneko lifike kwi-ethile imali karhulumente. Zombini imali zixhaswa yi-obligatory Russian yokhuseleko lwezentlalo intlawulo ukuba ingaba deducted ukusuka yakho epheleleyo umvuzo, nangona abanye inkcitho kwaye zenkohliso zisebenze kusenokuba exempt ukususela balo. Ungakhetha kwakhona yenza igalelo elongezelelweyo olenza ngokuzithandela ukuba ufuna ukugcina kuba yakho kwi-pension Us okanye isicwangciso kuba ngcono umhlala-phantsi kwi-Us. Expats ngabo kuphela netyala ukuhlawula resident Russian irhafu kunye namaqonga imirhumo ukuba babe ukuhlala kweli lizwe, ubuncinane imihla ngexesha unyaka wekhalenda. Yakho umqeshi uya ngokuqhelekileyo ilungelelanise kuba yakho yobhaliso nge-Russian irhafu-ofisi kwaye silondolozekile yakho yokhuseleko lwezentlalo inani. Mna-uqeshiwe abasebenzi kuya kufuneka ukuba ilungelelanise zabo irhafu ubhaliso kwaye Russian yokhuseleko lwezentlalo inani ngokwabo. Abaqeshi bamele kanjalo eliphathiswe deducting i-compulsory isixa-mali ukususela imivuzo yabasebenzi kunye ukubhatala urhulumente. Ukungaphumeleli ukwenza njalo phambi th zilandelayo inyanga iziphumo a amabini ipesenti esangezelelweyo. Ukuba abaqeshi bafunyanwa ukuba abe avoiding irhafu imirhumo egameni labo abasebenzi, bamele fined amane ipesenti ye iyonke isixa-mali earnings. Abasebenzi asingawo obliged ukuhlawula yokhuseleko lwezentlalo imirhumo kwi-Russia, kodwa endaweni yoko lo mthwalo rests yavakalisa kwi umqeshi, kuquka mna-uqeshiwe abantu (ezifana entrepreneurs, notaries nabaqondisi-mthetho) okanye nabani na ongomnye employing umntu wesithathu phantsi i-imisebenzi zengqesho. Ukusuka ngowama, isirussian irhafu-mandla — endaweni loluntu imali — uza kuba noxanduva ulungiselelo uninzi yokhuseleko lwezentlalo intlawulo. Russian yokhuseleko lwezentlalo igalelo amazinga ngowama- unako nokwaphuka kwi iindidi ezilandelayo: ukongeza, inkqubo esisinyanzelo kunokwenzeka ingozi imirhumo ye-inshorensi ingaba ihlawulwe kwi amazinga ranging ukusuka ku. zintlanu ipesenti ye ngumqeshwa ke umvuzo, kuxhomekeke umgangatho assessed umngcipheko yabasebenzi ke umsebenzi. Oku ihlawulwe ngokwahlukeneyo ukuya ngasentla yokhuseleko lwezentlalo imirhumo, kwaye uzole administed yi-loluntu imali. Ngendlela ethile kwiimeko Russian yokhuseleko lwezentlalo zibe exempt umzekelo, ingeniso earned yi-abasebenzi abavela kumazwe angaphandle hired phantsi highly-izakhono abasuka kwezinye iindawo schemes kusenokuba exempt ubhatala imirhumo, nangona kunokwenzeka ingozi imirhumo iya ngxi kuba ezigunyazisiweyo. Uninzi foreigners kwi-Russia, nangona kunjalo, kuquka EU abemi, iya kuba phantsi enye inkqubo esisinyanzelo imirhumo njengoko Russian abavela kumazwe angaphandle. Ukuze ube unelungelo lokuba Russian-ngqesho izibonelelo, kufuneka ube neminyaka yobudala engaphezulu kwe-elinesithandathu ubudala, nako ukusebenza, bekhangela ezilungele umsebenzi, kwaye musa unayo nayiphi na uhlobo ingeniso okanye kwi-pension Saserashiya. Kwi-Moscow, izicelo kufuneka zenziwe Kwisebe labasebenzi emisebenzi ye Moscow, xa ufuna ukuya kutyelela ekufutshane nawe Federal Nabasebenzi emisebenzi Inkonzo ukuba uhlala kwenye indawo kwi-Us. Ukuba ufake isicelo sephepha-ngqesho inzuzo kwi-Russia kufuneka zithe abaphila kweli lizwe kuba ngaphezu iintsuku nawuphi na -nyanga xesha kwaye unikeze zilandelayo amaxwebhu: Onke amaxwebhu kufuneka ibe officially eziqinisekisiweyo — esayiniweyo kwaye stamped — yi-iziko ukuba ekhutshwe kwabo. Abo kuba zange ukuba uqeshiwe kuphela kufuneka incwadana yokundwendwela kwaye isiqinisekiso imfundo ebonisa umgangatho qualification kwenzeka. Phezu isicelo, uya kuphengululwa ngokusesikweni i-a re-assessment umgaqo-nkqubo uncedo kuwe ukufumana ezilungele imisebenzi kwi-Us. Ukuba oko? does not help oyedwa ukufumana umsebenzi, ngoko baye iya kuba ebhalisiweyo njengoko unemployed kwaye unelungelo lokuba afumane Russian-ngqesho izibonelelo kuba ubukhulu abalishumi elinesibini zidlulileyo. Ukuba ufaka? ngaphandle umsebenzi elinesibini emva kweenyanga ezintathu, uyakwazi reapply kuba izibonelelo. Intswela-ngqesho inzuzo kwi-Russia ingaba ngokuqhelekileyo imali qho ngenyanga kwaye ibalwa ngokusemthethweni kwi ipesenti elidlulileyo avareji imivuzo, apho reduces kulo lonke -nyanga xesha. Ngenyanga intlawulo aqala kwi RUB, ama kuxhomekeke kwizicwangciso zakho savings. Low-ingeniso iintsapho bamele kanjalo anelungelo lokuba discounts kwi amayeza. Phantsi Russian nabasebenzi umthetho, abasebenzi anelungelo ngakumbi protections ukuba uninzi ezinye EU amazwe. Maternity leave kwi-Russia yindlela elungileyo umzekelo oku, njengoko pregnant abafazi kunye imisebenzi izivumelwano anelungelo iintsuku maternity leave — asixhenxe phambi ngenxa umhla wokuzalwa kwaye asixhenxe imihla i-kweenkonzo — kwaye unelungelo lokuba afumane anamashumi ipesenti zabo umvuzo. Kwimeko apho complications okanye enika wokuzalwa ukuba twins ne triplets, inani leentsuku ngu eyandisiweyo phezulu ukuya ubukhulu ka- imihla. Xa khawucinge nge-Russian maternity leave, kuya kufuneka kukhunjulwa ukuba iyonke thathwa umvuzo intlawulo akufunekanga zingaphezu RUB. Maternity izibonelelo bamele kanjalo wanika ukuba couples ngubani na ukuthatha umntwana ngaphantsi kweminyaka.
Zininzi omnye-ixesha, maternity inzuzo uhlawulo pregnant abafazi phantsi kwezi iimeko: Kwi, i-Russia iphumeze reformed pension system ukuba encompasses zintathu iintlobo pensions: urhulumente, compulsory umsebenzi umhlalaphantsi kunye non-imo pensions. I-compulsory pension rewards abasebenzi kwi-zintathu iindidi — ubudala ubudala, ukukhubazeka, kwaye survivor umhlalaphantsi. Phambi kwenu anelungelo kufumana i-Russian pension, kufuneka ube negalelo compulsory-Mali yomhlalaphantsi ka-isirashiya (PFR) ubuncinane iminyaka esibhozo. Emva kokuba isibini ixabiso rises ngowama, wesizwe pension kwi-Russia injalo nge RUB, ngathi kutshazimpunzi ngowama. Kwi-edluleyo, i-avareji kwi-pension Moscow waba eliqikelelwa jikelele RUB, kwaye RUB, zintandathu — anamashumi kuba St Marengo. Abantu abo okuqonda isibonelelo sokukhubazeka, yintsholongwane jikelele ukugula, umsebenzi injury, negosa isifo okanye military iinkonzo banelungelo ukukhubazeka umhlalaphantsi. Ukuba abe banelungelo lokufumana isibonelelo Sokukhubazeka, Nabasebenzi Pension kufuneka zithe kwi-ingqesho. Survivor pensions ingaba wanika: abahlolokazi kunoko kwama- (okanye widowers kwaye abazali kunoko kwama-) okanye unemployed baza bathabathela care yomntwana younger than ishumi elinesine okanye yenziwe ukuba ingasebenzi abantwana phezulu ishumi elinesibhozo ubudala oodade nabantakwabo elinesibhozo ubudala kwaye oomawomkhulu iphelelwe amathandathu kwaye okanye nangaphezulu okanye yenziwe ukuba ingasebenzi. Ezongezelelweyo pensions ingaba imali yi-non-imo private-pension funds. Ukuba kuba beneficiary kufuneka enze isivumelwano ne-mali kwaye yenza kungokuzithandela imirhumo ngexesha lakho career. Ngolwazi oluthe vetshe malunga iintlobo pensions ezikhoyo kwi-Russia kwaye yakho entitlement ukuba izibonelelo, ukufunda Russian abaqondisi-mthetho isikhokelo Russian pension indlela. Russia sibonwa njengoko omnye eyona amazwe ukuba uthathe umhlala phantsi. Kweminyaka umhlala-phantsi kwi-Russia kuba abantu ingaba amathandathu kwaye kuba abafazi, nangona ezi iminyaka ingaba phezulu kuba kovavanyo kwi. Umyinge wesizwe pension kwi-Russia kanjalo ngoku injalo nge RUB, zine — anamashumi ngexesha Moscow i-avareji pension ngu RUB, kwaye RUB, kuba St Marengo. I-Pension Fund ye-isirashiya sele phantse, amakhulu amahlanu jonga ofisi kweli lizwe. Ukubona yintoni yakho iinketho kwaye ukuba ukhe ubene banelungelo lokufumana i-Russian pension, ukufunda Russian abaqondisi-mthetho isikhokelo kwi retiring ukuba Saserashiya. Russian amagunya enze kunyanzelekile ukuba imali ye-inshorensi yezempilo kwi-Russia ukuba i-arhente yokhuseleko lwezentlalo indlela. Oku entitles wonke umntu ezingundoqo zonyango care covering ngeenkonzo zongxamiseko, kwaye free wonke umntu ophilayo kwi-Us. Umgangatho-wonke inkathalelo kwi-Russia sisezantsi kuthelekiswa nezinye kwaphuhliswa amazwe kwaye lacks isixhosa-ukuthetha doctors, nangona kukho abaninzi private inkathalelo centres ekuboneleleni iinkonzo zonyango no nemigangatho yehlabathi. Funda okungakumbi malunga Russian inkathalelo system kwaye Russian impilo i-inshorensi kunye Russian abaqondisi-mthetho kuluncedo izikhokelo. Foreigners makhaya Us okanye staying kuba kwixesha elifutshane kufuneka ube private utyelele i-inshorensi phambi kokungenisa kweli lizwe. Ukuba uceba ukuba uhlale kuba elide kwaye isicelo sesibonelelo wethutyana okanye osisigxina-visa, iinqwelo abahlali bamele ngokusemthethweni kufuneka uthenge, inkathalelo i-inshorensi.
Ngaphandle kwayo awusayi kuba awarded i-Russian visa
Expats unako ke kuxhamla efanayo karhulumente inkathalelo ukufikelela njengoko wobulali abemi. Enye inkqubo esisinyanzelo ye-inshorensi yezempilo, kukho ezinye iintlobo-inshorensi kwi-Russia ukuba expats kufuneka ngobukho. Umzekelo, ushishino-inshorensi ngu kwalomgaqo-siseko ukuba ungummi ishishini umnini. Imigaqo-nkqubo phantsi xa kuba izithuthi, ngabasebenzi, uluntu eyimali kunye building kwaye umxholo i-inshorensi. Ukuba uceba ukuba drive kwi-Russia, kufunwa ngumthetho ukuthatha ngaphandle car i-inshorensi. Kubalulekile kananjalo kucetyiswa ukuba ingaba personal i-inshorensi ukuba iquke kuwe kuba injury ukuba ngokwakho nabanye. Kufuneka kwakhona cinga ekhaya i-inshorensi ukuba sijongana umlilo, amanzi umonakalo, ubusela vandalism, nokuba renting kwi-Moscow okanye ukuthenga Russian ipropati.
Kwezinye iimeko, inokuba imeko kuba ifumana i-Russian mortgage
Kuba personal i-inshorensi, kukho plenty inshorensi iinkampani tailored ukuba foreigners. Russia ke engundoqo ye-inshorensi iinkampani ziquka Ingosstrakh, Rosgosstrakh kwaye Reso Garantiya. Zininzi imfundo inzuzo kwi-Russia kukunceda kakhulu ujonge ngalo. Umzekelo, i-Russia ngu phakathi ezimbalwa amazwe ukuze anikele free tuition kuba bamazwe angaphandle. Nyaka ngamnye, urhulumente mbasa eziliqela amawaka-Russian scholarships ukuba ngamazwe abafundi ezama ukuba bafunde nzulu kwi-Us. Emva kokuzalwa yomntwana, isirussian umntwana izibonelelo ingaba ihlawulwe yonke kwiimeko ezithile, umzekelo, kuba low-ingeniso iintsapho, abantwana abazelwe ngexesha ngumzali waba wayekhonza njengokuba soldier okanye abazali kwi maternity okanye umntwana-rearing shiya (nangona abazali abo babuyela umsebenzi unako nokufumana kakhulu isixa-mali ukuya kwi-amane ipesenti i-avareji umvuzo). Low-usamkela iintsapho ube unelungelo lokuba enye izibonelelo phantsi kweemeko ezithile. Isixa-mali kweelwimi iya kwenziwa ngokusekelwe yakho umvuzo zonyaka kuba edlulileyo iinyanga ezintathu. Kunye abantu ngomhla sokukhubazeka, izibonelelo, wena anelungelo athile asemthethweni kwaye zonyango izibonelelo
Mhlophe Indlu disputes ukuba ixilongo layo saliwe-Russia? kujoliswe i US